Radishes tongolo gasy namboarina | Recipe ao an-dakozia
Recipe ao an-dakozia
Fanondroana momba ny recette
Radish tongolo gasy natsatsika
Hana mitchell | | General
Hifarana ny dikarion'ny garison 'patatil'!
Androany dia manolo-kevitra ny hanome fihodinana mahasalama sy mahagaga amin'ny bokinao momba ny resinao aho mba hialana amin'ny fomba amam-patatil izay mamono ny hena na ny lohan-trondro izay nataonao hatramin'ny nahaizanao mahandro. Efa nieritreritra ny hampiasa radish ve ianao mihoatra ny fampidirana loko amin'ny salady? Amin'ity fomba fahandro androany ity dia asehoko anao ny fomba hiomanana radia voadio tongolo lay. matsiro
Fa maninona no radish? Satria izy ireo tsara cuquis salama ary mety ho iray amin'ireo mpiara-miasa tsara indrindra amin'ny fihenan-danja na ny sakafo fikojakojana. Izy ireo dia mety ao sakafo ambany kaloria satria manana kely noho ny 20 Kcal isaky ny 100 grama. Izy ireo dia misy rano sy sira mineraly be dia be, solifara, vy ary iode ary indrindra manankarena vitamina C. Noho izany dia mankasitraka ny fametahana vy izy io, ary manana toetra mahavelona be dia be.
Ary koa ... sakafo miloko mavokely izay azonao atao ny mihinana manta, nandrahoana, nendasina ary nokapohina ... mendrika omenao azy farafaharatsiny iray izany
Androany dia manolotra hevitra aho mba hialana amin'izay fitsipika tsy voasoratra izay manery anao hiaraka amin'ny hena sy ny hazandrano miaraka amin'ny haingo ovy, vary na salady mankaleo ary manasa anao aho hanandrana an'io zava-mahadomelina voasaron'ny tongolo lay io. Amin'ny maha lovia tokana na lovia iray hafa.
Author: Hana mitchell
Fotoana fiomanana: 5 M
Fotoana hiketrehana: 20 M
Fotoana manontolo: 25 M
Menaka oliva 2 sotro fihinanana
Rosemary 1 sprig,
Fehiloha tongolo gasy 2
sira sy dipoavatra.
Manomboka amin'ny fanafoanana ny lafaoro hatramin'ny 180 ºC isika.
Diovina ny ravina, ny volo ary ny tany.
Notapahinay roa izy ireo.
Mandoto ny sampana rometo izahay.
Voaso ny tongolo-tongolo lay ary tapaho izy ireo,
Apetrakay eo ambony lovia fanaova-mofo, ny tongolo gasy voadidy ary ny rosemary.
Manaova fotoana hanandrana, ampio menaka, afangaro ary apetraho ao anaty lafaoro.
Manendasa 20-25 minitra izahay.
Fampahalalana momba ny sakafo isaky ny fanompoana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » General » Radish tongolo gasy natsatsika
Eleanor Perez dia hoy izy:
Toa matsiro be ilay lovia ary ity legioma ity mihitsy dia manana tsiro hafakely, misaotra betsaka tamin'ny fizarana ity fomba fahandro mahafinaritra ity
Valiny tamin'i Leonor Pèrez
Emi dia hoy izy:
Fomba fahandro mahavariana! Nataoko ary matsiro !! 🙂 Misaotra
Valiny tamin'i Emi
Gabriela dia hoy izy:
hace 10 volana
Inona ilay «dicatura». "Boliga", "pelor", "rometo", "reogamos"?
Valio amin'i Gabriela
Zanak'ondry miaraka amin'ny ahitra Provencal
Resipeo ao amin'ny mailakao
Resipeo rehetra amin'ny mailakao